Gantaal - Wikipedia
2 Taariikhda Gantaalada
3 Isticmaalka Gantaalada
4 Khatarta Gantaalada
5 Saamaynta Gantaalada
Gantaal waa nooc ka mid ah hubka dheereeya ee ka duula qaarad ilaa qaarad kale.
Gantaal (Ingiriis: Missile) waa nooc ka mid ah hubka dheereeya ee ka duula goobta laga riday ilaa meesha lala rabo asagoo sii dhex maraya cirka, kaas oo ujeedadiisu tahay in wax lagu burburiyo. Qaab dhismeedka Gantaaladu waa afar: bar-tilmaadeedka iyo hagitaanka, duulimaadka, nooca mashiinka saaran, iyo nooca madax-hub ee uu wado.
Inkastoo ay jiraan Gantaalo ayagu ismaamula, inta u badan waa mid la hago ilaa uu ka gaadhayo bar-tilmaameedkii lala rabay.
Gantaalada waxaa ka dhalan karta khatar aad u ballaaran taasoo laga yaabo in lagu rakibo hubka wax gumaada ee nuclier-ka meeshii lagu dhufto la iskuma hayo inay ka dhacayso burburkii ka dhacay jaban oo kale.
Gantalada xanbaara hubka nuclier-ka wa hubka ugu culus e casrigan laga isticmaalo caalamka. Waxana lagu tilmama dawladii hesha hubkan inay la gor-gortami karto USA xataa aan la isku dayi karin in la weeraro oo loga baqayo hubkan
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gantaal&oldid=172297"
Last edited on 8 Diseembar 2017, at 14:23
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Diseembar 2017, marka ee eheed 14:23.